အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊
သ၊ စ၊ အ ဓမ္မာစရိယ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်
သီတဂူ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်
ဆရာတော်ကြီးအား ဖုးလိုသူများသည် နေ့လည် ၃နာရီမှ ၅နာရီအတွင်း လာရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ Silk-Air/Singapore Air-line Flight Details:
Arrival - Date: 25-Oct-2012 (Thursday), Flight No: MI511 , Time: 2:45pm, Changi Airport Terminal 2
Departure - Date: 31-Oct-2012 (Wednesday), Flight No: MI518, Time: 2:20pm, Changi Airport Terminal 2
ပါချုပ် ဆရာတော် ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒမာလ ဘိဝံသကို ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုများမှ စင်္ကာပူသို့ တရားဟောကြွရောက်ရန် ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ တရားပွဲများကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ပါမည်။ (မှတ်ချက်။ တရားပွဲ ၃ရက်သည် တရက်နှင့် တရက် အကြောင်းအရာ ဆက်စပ်နေပါသဖြင့် ၃ ရက်စလုံးကို လာရောက်နာယးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။)
ဆရာတော်ကြီးကို သင်္ကန်းကပ်လှုလိုသူများသည် သင်္ကန်း တစုံလျှင် $30 နှုန်းဖြင့် တရားပွဲ ကောင်တာတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကောင်တာမှ Token များ ပေးထားပါမည်။ ဆရာတော်ကြီးအား စုပေါင်း သင်္ကန်းကပ်လှုပွဲကို တနင်္ဂနွေနေ့တရားပွဲ အပြီးတွင် ကျင်းပ ပါမည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် သင်္ကန်း ဝယ်ယူထားသူများသည် မိမိတို့ထံ ပေးဝေထားသော Token များကို ကောင်တာတွင် ပြ၍ သင်္ကန်း ထုတ်ယူပြီး ဆရာတော်ကြီးထံ အုပ်စုလိုက် အလှည့်ကျ သင်္ကန်း ကပ်လှုရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
Q&A Session ပြုလုပ်ရန် ဆရာတော်ကြီးကို လျှောက်ထားကြည့်ပါမည်။ အဆင်ပြေလျှင် နေ့စဉ် တရားပွဲ အပြီးတွင် အချိန်ရသလောက် မဲ နှိုက် စနစ် ဖြင့် ဖြေဆိုရန် စီစဉ်ကြည့်ပါမည်။ မေးလိုသော မေးခွန်းများကို စာရွက်တွင်ရေး၍ ဆရာတော်ကြီးမှ မဲနှိုက် ဖြေရန် စီစဉ်ကြည့်ပါမည်။
၃၀-၁၁-၂၀၁၂ တိုပါးရိုးကျောင်းကြီးတွင်ကျင်းပသော ပုဝါရဏာပွဲ အပြီးတွင် Buddhist Fellowship (YEO Building) ၌ကျင်းပသော ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ တရားပွဲ သို့ သွားရောက်နာကြားလိုသူများအတွက် Bus တစီး စီစဉ်ထားပါသည်။ ၆း၃၀ ကျောင်းကြီးမှ ထွက်ခွာပါမည်။
နေ့ရက်။ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ သောကြာနေ့
အချိန်။ ညနေ ၇နာရီမှ ၉နာရီထိ
နေရာ။ Function Room 1, The ARENA Country Club, 511 Upper Jurong Road, Singapore 638366, near (JooKoon MRT)
(ဆရာတော်ကြီး၏တရားပွဲ ဒုတိယနေ့ 27-Oct-2012 Arena Country Club နေရာတွင် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနှင့် တိုက်ဆိုင်နေပြီး တရားပွဲနှင့်နီးကပ်စွာပြုလုပ်ရန် အဆင်မပြေ တော့ ပါသဖြင့် ထို စနေနေ့ (၂၇-၁၀-၂၀၁၂)တရားပွဲကို တိုပါးရိုး မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းထားပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။)
နေ့ရက်။ ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ စနေနေ့
အချိန်။ ညနေ ၆း၃၀ နာရီမှ ၈ နာရီထိ
နေရာ။ Sasanaramsi Burmese Buddhist Temple မဟာသာသနရံသီ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကြီး 14, Tai Gin Road, (Off Ah Hood Road), Singapore 327873
နေ့ရက်။ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန်။ ညနေ ၇ နာရီမှ ၉နာရီထိ
English Language Dhamma talk in Singapore by Dr. Nandamala Bhivamsa
Topic: "Why Buddhist must study Abhidhamma, Samatha and Vipassana"
Place: Yeo�s Building, BUDDHIST FELLOWSHIP Dhamma Hall
2 Telok Blangah Street 31 #02-00, Singapore 108942
(near LABRADOR PARK MRT Station)
Organized by BUDDHIST FELLOWSHIP
T : 6278 0900 | F : 6278 0102
The dhamma talk will be transmit live on the following website
မှတ်ချက် ။ ပုဝါရဏာပွဲမှ Buddhist Fellowship (YEO Building) ၌ကျင်းပသော ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ တရားပွဲ သို့ သွားရောက်နာကြားလိုသူများအတွက် Bus တစီး စီစဉ်ထားပါသည်။ ၆း၃၀ ကျောင်းကြီးမှ ထွက်ခွာပါမည်။
သံဃာ့ပဝါရဏာပွဲ၊ သိမ်ဆင်းလောင်းလှုပွဲနှင့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့
ဆရာတော်ကြီးသည် သာသနရံသီ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကျင်းပမည့်၊ သံဃာ့ပဝါရဏာပွဲ။ သိမ်ဆင်းလောင်းလှုပွဲနှင့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ကို တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နေရာ။ Sasanaramsi Burmese Buddhist Temple မဟာသာသနရံသီ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကြီး (Topayoh ကျောင်းကြီး)
14, Tai Gin Road, (Off Ah Hood Road), Singapore 327873 Tel: 6251 1717
နေ့ရက်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့် (အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့)
၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ (အင်္ဂါနေ့)
ညနေ (၅း၃၀) နာရီ - သံဃ ပဝါရဏာ ကံဆောင်ခြင်း
ညနေ (၆း၀၀) နာရီ - ကံဆောင်သံဃာတော်များအား သိမ်ဆင်းလှူဖွယ်ဝတ္ထုများစုပေါင်းလှူဒါန်းခြင်း
- ပရိတ်သတ်မှ သံဃာတော်များအား ရှိခိုးကန်တော့ခြင်း
- သံဃာတော်များမှ ပရိတ်တရားတော်များ ချီးမြှင့်ခြင်း
- လှူဒါန်းမှူအစုစုကို အမျှပေးဝေခြင်း
- ကျောင်းပေါင်းစုံမှ သံဃာတော်များ ပြန်ကြွခြင်း
ညနေ (၆း၃၀) နာရီ - စုပေါင်းဘုရားရှိခိုးပူဇော်ခြင်းနှင့် အဘိဓမ္မာတရားတော်များ ရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်း
ဆရာတော်ကြီး သီတင်းသုံးမည် ယာယီကျောင်းဆောင် လိပ်စာ မှာ
Orchard Parksuites ၊ အခန်း နံပါတ် ၀၅-၀၆
11 Orchard Turn, Orchard, Singapore 238800
အောက်ဖေါ်ပြပါ Google Map သည် ဆရာတော်ကြီး ယာယီကျောင်းဆောင် နေရာ ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ ဆွမ်း အလှုဒါန
ဆက်သွယ်ရန်။ ဒေါ်ဆွေဆွေကြိုင် (၉၇၃၆၃၅၅၄)၊ ဦးကျော်လွင် (၉၇၃၆၅၀၃၄)၊ ဦးအောင်နိုင် (၉၂၂၇၇၄၉၁)၊ ကိုဇော်မိုးစံ (၉၁၇၁၄၃၅၀)၊ ဦးဝင်းဘို (၈၄၅၇၂၉၃၁)၊ ဦးကျော်ဝင်း (၉၇၆၁၂၇၄၇)၊ ဦးရဲမြင့်(၈၆၅၂၈၂၇၇) ၊ ဦးတင့်လွင် (၉၈၅၈၁၃၂၉)၊ ဒေါ်လှလှဝင်း (၉၆၆၉၅၇၇၄)
DBS Saving Plus အကောင့်နံပါတ် ၀၇၀-၀-၀၁၂၂၅၇ ထဲသို့ တိုက်ရိုက် လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်...အလှုငွေလွှဲပြီးလျှင် အလှုရှင်များ၏ အမည်နှင့် လွှဲသည့် ပမာဏနှင့် အကြောင်းအရာကို dhammadownload.admin@gmail.com သို့ email ပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်...
ဤတရားပွဲ ကို ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၏ သူငယ်ချင်းများကို လက်ဆင့်ကမ်း Invite လုပ်ပေးကြပါရန်
၁။ ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ( ဦးလောဟွမ် + ဒေါ်လမ်ပွဲ ) အားရည်စူး၍ ဦးမျိူးထွန်းဦး + ဒေါ်ဝေေ၀ဦး မိသားစုမှ တရားဟောခန်းမ အတွက် အလှူငွေ S$4000
၂။ SilkAir Tickets ( Business Class ) အသွား နှင့် အပြန် အလှူရှင် US$1000 ခန်.
ကိုချမ်း (Mr Pitak Chaiprasit)+ မဖြူဖြူလှိုင် နှင့် သမီး မမေမာလာကျော် (PanPan), သား ကိုလင်းမင်းခန့် (Bond), သမီး မမေသန္တာကျော် (Xiao Xiao)
၃။ ဦးထူးမြင့် + ဒေါ်လှလှအေး မိသားစု - S$100
၄။ မြတ်လယ်တီ အဖွဲ့ (စင်္ကာပူ) - S$500
၅။ မနှင်းဖြူ - S$300
၆။ ကိုသောင်းတင် - S$10
၇။ ကိုအောင်ကိုမြင့် + မထက်ထက်နိုင် မိသားစု - S$100
၈။ မသီတာသိန်း - S$50
၉။ မသင်းသင်းအေး - -S$100
၁၀။ ဦးတင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်သန်းသန်းဌေး မိသားစု (တရားပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး) - S$100
၁၁။ ကိုမောင်မောင်ကြီး + မသင်ဇာဝင်း မိသားစု - S$100
၁၂။ ဦးစိုးသိန်း+ဒေါ်မြသက်နှင်း၊ သမီး နှင်းထက်ထက်စိုး၊ အေးသက်သက်စိုး မိသားစု - S$100
၁၃။ ကိုထွန်းထွန်းဝင်း+ မခင်သော်ဇင် မိသားစု - S$၅၀
၁၄။ ကိုတင်သန်းမိသားစု - S$၃၀
၁၅။ ကိုငွေစိုး မိသားစု - S$၂၀
၁၆။ ကိုစန်းမြင့် မိသားစု - S$၂၀
၁၇။ ကိုညီညီထွေး မိသားစု - S$၂၀
၁၈။ ဒေါက်တာ စိုင်းကျော်ရွှေ၊မသန်းသန်းထွေး၊ သမီး နန်းမိုးပွင့်ဖြူ၊ နန်းသဒ္ဓါထက်၊ နန်းအေမီကို မိသားစု (စိန်ပန်းပြာ ရောင်းဝယ်ရေး ၊ Peninsula Plaza) - ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ (ဓမ္မပူဇာ)
၁၉။ ကိုနိုင်နိုင် + မရင်ရင်ဋ္ဌေး (တရားဟောခန်းမ) ၁၃-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၀
၂၀။ မောင်ညီညီမိုး + မသင်းသီရိစံ ၁၃-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၁။ ဦးဇော်ဝင်း + ဒေါ်အေးအေးသွယ် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၂။ အရှင်ဝရသာမိ (ဓမ္မဒူတ - မှော်ဘီ) ရန်ကုန်၊ မြန်မာ - ၁၇-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၃။ ဦးအောင်အောင် + ဒေါ်မီမီအောင်၊ သမီး မချိုနီမောင် - ၁၈-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၄။ ဦးဇော်ဝင်း + ဒေါ်ကြင်အေး မိသားစု - ၂၃-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၅။ မဖြူဖြူအောင် --- ၂၄-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၆။ ကိုတင့်နိုင်ဦး -----၂၄-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၇။ မခင်သက်ဆွေ --- ၂၄-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၈။ မမြတ်စန္ဒာစိုး ---- ၂၅-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၉။ မမေစန္ဒာစိုး ---- ၂၆-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
ဆရာတော်ကြီး၏ ယာယီကျောင်းဆောင် အလှုရှင်များ
၁။ မနှင်းအိလွင် - S$1000
၂။ မဇာဇာဝင်း၊ ကိုဇော်လင်းအောင်၊ ကိုဖြိုးသော်လွင်၊ ကိုဖြိုးမောင်မောင်၊ မနွယ်နီ၊ မခင်မ၊ မဖြူဖွေး၊ မချိုဝေမွန်၊ မရွှေရီ၊ မချိုမာဇင်- S$560 (တရက်စာ)
၃။ ကိုဆွေသက်မောင် + မမွှေး - S$560 (တရက်စာ)
၄။ ဦးသန်းမြင့်ဦး+ဒေါ်ချိုချိုမာ မိသားစု - S$100
၅။ ကိုကျော်စွာလင်း+မကေခိုင် - S$200
၆။ ကိုနေမျိုးဇော် - S$200
၇။ ကိုကျော်လှိုင် - S$60
၈။ ကိုသန်းထွန်းဝင်း - S$50
၉။ ကိုဟိန်းလတ် - S$50
၁၀။ မမီမီ‌ဆွေ - S$ ၁၀၀
၁၁။ ကိုဇော်ချမ်းမြေ့ + မသက်ထက်နိုင် - ၁၆-၁၀-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၁၂။ မဋ္ဌေးဋ္ဌေးကြည် မိသားစု - S$560 (တရက်စာ)
၁၃။ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း - S$500 (တရက်စာ)
၁၄။ ကိုဇော်ဇော်ချို + မမိုးမိုးမင်း - စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
ဆရာတော်ကြီး၏ တရားပွဲ အချိုရေ အလှုရှင်များ
၁။ ဦးမောင်မောင်သန်း+ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း၊ သမီး ဆုမြတ်အောင် မိသားစု - တရားပွဲ ၁ ရက်စာ အချိုရည်
၂။ ဦးပန်းအောင်+ဒေါ်လှလှဝင်း မိသားစု - တရားပွဲ ၁ ရက်စာအတွက် သောက်ရေသန့် S$200
၃။ ဦးခင်မောင်စန်း+ဒေါ်မူမူအေး၊ သမီး အေးသီခိုင်၊ မိသားစု - တရားပွဲ ၁ ရက်စာအတွက် သောက်ရေသန့် S$200
၄ ။ မဇာဇာဝင်း၊ ကိုဇော်လင်းအောင်၊ ကိုဖြိုးသော်လွင်၊ ကိုဖြိုးမောင်မောင်၊ မနွယ်နီ၊ မခင်မ၊ မဖြူဖွေး၊ မချိုဝေမွန်၊ မရွှေရီ၊ မချိုမာဇင်- တရားပွဲ ၁ ရက်စာအတွက် သောက်ရေသန့် S$200
၅ ။ မဇာဇာဝင်း၊ ကိုဇော်လင်းအောင်၊ ကိုဖြိုးသော်လွင်၊ ကိုဖြိုးမောင်မောင်၊ မနွယ်နီ၊ မခင်မ၊ မဖြူဖွေး၊ မချိုဝေမွန်၊ မရွှေရီ၊ မချိုမာဇင်- တနင်္ဂနွေနေ့ တရားပွဲတွင် ဆနွင်းမကင်းမုန့် လှုဒါန်းပါမည်။
၆။ ဦးတင့်လွင် မိသားစု၊ ဦးခိုင် မိသားစု၊ ကိုအောင်ကိုမြင့် မိသားစု - တရားပွဲ ၁ ရက်စာအတွက် သောက်ရေသန့် S$290
၇။ Bukit Batok ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အဖွဲ့ မှ သောကြာနေ့ညနေ တရားနာ ပရိတ်သတ်များအတွက် ကြာဇံကျော် လှုဒါန်းပါမည်။
၈။ ကိုဘုန်းကိုကိုနိုင် နှင့် သူငယ်ချင်းများ၊ အလှုရှင်များ စုပေါင်း၍ - သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် တရားနာ ပရိတ်သတ်များအတွက် ဌက်ပျောသီး လှုဒါန်းပါမည်။
၉။ ကိုမင်းမင်းခိုင်+မစောယုနှင်း၊ သား စိုးရာဇာထွန်း၊ ထက်တေဇစိုး မိသားစု - ၂၆-၁၀၂၀၁၂ သောကြာနေ့ တရားနာ ပရိတ်သတ်များကို ကျောက်ကျော လှုဒါန်းပါမည်။
၁၀။ Bukit Batok ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အဖွဲ့ မှ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ တရားနာ ပရိတ်သတ်များအတွက် လ္ဘက်နှင့် ထမင်း လှုဒါန်းပါမည်။
၁၁။ ကိုကျော်ဇေယျာထွန်းနှင့် မမေတို့မှ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ တရားနာ ပရိတ်သတ်များအတွက် ကျောက်ကျောမုန့် လှုဒါန်းပါမည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ အာရုံဆွမ်းနှင့် နေ့ဆွမ်း အလှုရှင်များ
(ဆရာတော်ကြီး အတွက် ဆွမ်းကို Orchard Parksuites တွင် ကပ်ရပါမည်။)
၂၆-၁၀-၂၀၁၂ သောကြာနေ့ (အာရုံဆွမ်း) ဦးနေဝင်း + ဒေါ်တင်တင်ဝင်း မိသားစု
၂၆-၁၀-၂၀၁၂ သောကြာနေ့ (နေ့ဆွမ်း) ၁) မဇာဇာဝင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ
၃) ဦးသန်းမြင့်ဦး+ဒေါ်ချိုချိုမာ မိသားစု
၂၇-၁၀-၂၀၁၂ စနေနေ့ (အာရုံဆွမ်း) ကိုဋ္ဌေးဝင်းဦး+မရွှေရီတင့် မိသားစု
၂၇-၁၀-၂၀၁၂ စနေနေ့ (နေ့ဆွမ်း) ၁) မနှင်းနှင်းယု
၂) ကိုမင်းမင်းထွန်း၊ မတင်နီလာစိုး
၂၈-၁၀-၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ (အာရုံဆွမ်း) ၁) ကိုမျိုးအောင်စန်း + မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ
၂၈-၁၀-၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ (နေ့ဆွမ်း) ၁) ဦးခိုင် မိသားစု၊ ဦးတင့်လွင် မိသားစု၊ ကိုအောင်ကိုမြင့်
၂) ကိုကြည်ရွှင်+မဆုဆုတင် မိသားစု
၂၉-၁၀-၂၀၁၂ တနလာင်္နေ့ (အာရုံဆွမ်း) ဦးပန်းအောင်+ဒေါ်လှလှဝင်း မိသားစု
၂၉-၁၀-၂၀၁၂ တနလာင်္နေ့ (နေ့ဆွမ်း) မအိအိထိုက်၊ ကိုဝိုင်းအောင်+မဆုရည်မွန် မိသားစု
၃၀-၁၀-၂၀၁၂ အင်္ဂါနေ့ (အာရုံဆွမ်း) ဦးခင်မောင်စန်း+ဒေါ်မူမူအေး မိသားစု
၃၀-၁၀-၂၀၁၂ အင်္ဂါနေ့ (နေ့ဆွမ်း) ၁) ဦးကိုကိုလေး+ဒေါ်ချိုချိုမြင့် မိသားစု
၂) ဦးစိုးသိန်း+ဒေါ်မြသက်နှင်း၊ သမီး နှင်းထက်ထက်စိုး၊ အေးသက်သက်စိုး မိသားစု
၃၁-၁၀-၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (အာရုံဆွမ်း) ကိုအောင်ဖြိုးမောင် and Families from Boonlay)
၃၁-၁၀-၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (နေ့ဆွမ်း) ၁) ဦးဝဏ္ဏကိုကို+ဒေါ်ဝင်းမင်းခိုင်၊ သား မောင်ဟိန်းသက်ထူး၊ သမီး စုမြတ်နိုးဝင်း မိသားစု
၂) ကိုအောင်ဖြိုးမောင် and Families from Boonlay
မိုးကျော်စိုးမိသားစု (san francisco, USA) မှ ဆရာတော်ကြီး၏ ဆွမ်းအလှုအတွက် ယူအက် ဒေါ်လာ၁၀၀ လုဒါန်း ပါသည်
ဘာသာရေး သာသနာအရေး လုပ်သူတိုင်းနှလုံးသွင်း ဆောင်ရွက်သင့်လှတဲ့ အထူးမှာကြားချက်
သြဝါဒဆိုတဲ့ စကားလုံးက အပြစ်မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ပြောတဲ့ စကားမျိုးဆုံးမသြဝါ ဒဆိုတာ လမ်းညွှန်မှု တစ်ခုပေါ့နော်၊ အရေးကြီးတာ တစ်ခုကိုမှတ်ဖို့က အလုပ် ကပြောစရာအနေနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်က ဘာသာရေး အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဝေယျဝစ္စတွေ ဆောင် ရွက် တယ် ဆိုတာဟာ လုပ်ငန်းအနေနဲ့က မြင့်မြတ်ပြီးသား ခုလုပ်တဲ့အလုပ်က မြင့်မြတ် ပြီးသား အဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကို မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်ဖို့လိုတယ် ပေါ့။ အရေးကြီးတာဟာ မြတ်စွာ ဘုရားက Mind Centre teachin လို့ခေါ် တယ်။ စိတ်ကို အဓိကထားပြီး ဆုံးမလေ့ရှိတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကတော့ မြင့်မြတ်တယ်၊ စိတ်ဓာတ် မြင့်မြတ်ဖို့ လိုအပ်တယ် ပေါ့။ အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ သူများအပြစ်ကို ရှာ ကြံကြည့်ရှုတဲ့ အလုပ်ကိုမလုပ်ဖို့ လုပ်မိရင် ကိုယ့်မှာ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ် ပေါ့၊ တစ်ခုကကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုပေမယ့်လို့ အကုသိုလ် ဖြစ်တတ်သေး တယ်။ မလုပ်တတ်လို့ရှိရင် အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကုသိုလ် လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ လုပ်မယ်ဆိုရ
င် ကုသိုလ်ရဖို့ပဲ လုပ်ကြရမယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ပြီး အကုသိုလ်မဖြစ်စေရအောင် ထားရ မယ်။ ကုသိုလ်ဖြစ်တယ် အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲ မှာဖြစ်တာ စိတ် ထဲဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ ဝစီကံတို့ ကာယကံတို့ဘက် ရောက်သွားတာပေါ့နော်၊
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ စိတ်ထဲမှာ အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင် တို့တတွေ ဒီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ကိုယ်ကျရာ တာဝန် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို အားကျိုးမာန် တက်လုပ်မယ်။ ကုသိုလ်ရဖို့ အဓိက ထားပြီးလုပ်မယ်၊ ဘာ သာ သာသနာရဲ့ အဆုံးအမအတိုင်း စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီး ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုင် မှုတွေ အားလုံးဟာ ကုသိုလ်သာ ဖြစ်စေရမယ်၊ အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူး၊ ငါလုပ်သမျှသည် ကုသိုလ် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာ မဖြစ်စေ ရဘူး။
နောက်ဆုံးမှာအချင်းချင်း တစ်ယောက်ပေါ် တစ်ယောက် အပြစ်မြင်လို့ပြီဆိုရင် အကုသိုလ်ဖြစ်သွား တတ်တယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ကိုယ့် စိတ်ထဲမှာ ဘယ်သူအပြစ်မှ မကြည့်ဘဲနဲ့ ကိုယ်အပြစ် မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့ လှုပ် ရှားသမျှသည် သာသနာအတွက် လုပ်ရှားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာထားပြီး ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်ကုသိုလ်ရဖို့ သေချာတယ်၊ အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အပြစ်အနာ အဆာတွေကိုမရှုဘူး၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ ကို ကိုယ်လုပ်မယ် ကိုယ်လုပ်သမျှသည် ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာအတွက် အလုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာခံယူပြီး အဲဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင် ကုသိုလ် စစ်စစ်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကုသိုလ်စစ်ရ အောင် ကြိုးစား အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ ကုန်သ တည်း� (သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါဘုရား)
(စင်္ကပူတရားပွဲ နောက်ဆုံးနေ့မှာ ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင် ဝေယျ ဝစ္စဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူများကို မိန့်ဆိုခဲ့တဲ့ သြဝါဒကထာ လေးပါ။)
Click Here for တရားတော် အသစ်များ
****dhamma talks uploaded and published on 15 Nov2009****
အားပေးစကား တရားတော် ၁၇-၂-၂၀၀၉
မတူတာတွေကို အတူထားနိုင်ခြင်းတရားတော် ၁၈-၂-၂၀၀၉
****dhamma talks uploaded and published on3March 2010 ****
ဓမ္မံသရဏံဂစ္စာမိ အဓိပ္ပါယ် အကျယ်ရှင်း တရားတော်
၆-၉-၂၀၀၆ ဘဝအသွင်ကို ဓမ္မအမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း တရားတော်
၂၅-၇-၂၀၀၇ ဘဝခရီးမှာလျှောက်လှမ်းရမည့်လမ်း တရားတော်
၂၆-၈-၂၀၀၇ လက်တွေ့ဘဝကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း တရားတော် (၁)
၂၆-၈-၂၀၀၇ လက်တွေ့ဘဝကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း တရားတော် (၂)
၁၉-၉-၂၀၀၇ မနုဿဓမ္မနှင့် ဥတ္တလိ မနုဿဓမ္မ တရားတော်
၂၅-၁၂-၂၀၀၇ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ၁၆-၂၅ တရားပွဲ အမှတ်စဉ်(၆)
၇-၁၂-၂၀၀၈ တောင်ပုံထဲကရတနာ တရားတော်
၁၇-၁၂-၂၀၀၈(၁) အစွမ်းတန်ခိုးများနှင့် သာဿနာတော်
၁၇-၁၂-၂၀၀၈(၂) အစွမ်းတန်ခိုးများနှင့် သာဿနာတော်
၂၅-၁၂-၂၀၀၈ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေ တရားတော်
၃၀-၁၂-၂၀၀၈ အင်အားရှိမှ အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်မည်
၉-၁-၂၀၀၉ လောကဓံမုန်တိုင်းများနှင့် ကြံ့ခိုင်သည့် စိတ်ထား တရားတော်
၁၀-၁-၂၀၀၉ ရောဂါကုစား စိတ်စွမ်းအား တရားတော်
၁၄-၁-၂၀၀၉ ကံကြမ္မာ၏ ရုပ်ပုံလွှာများ တရားတော်
၁၆-၁-၂၀၀၉ ကိုယ်ခံစွမ်းအား တရားတော်
၁၈-၁-၂၀၀၉ အနှစ်တရာနှစ် တစ်နေ့တာ
၂၀-၁-၂၀၀၉ နေတံ၊ မမ တရားတော်
၂၆-၃-၂၀၀၉ ကံကိုဖယ်ရှား ကံတရား အကြောင်းတရား ဒေသနာတော်
၁၉-၃-၂၀၀၉ အခွင့်ကောင်း တရားတော်
၁၉-၂-၂၀၀၉ အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိပဿနာ တရားတော်
၂၀-၃-၂၀၀၉ သေချာသောလမ်းမှလျှောက်လှမ်းပါ တရားတော်
၂၄-၂-၂၀၀၉ အတ္တာဟိ အတ္တာနော နာထော တရားတော်
၃၁-၁-၂၀၀၉ လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်အကြောင်း တရားတော်
****dhamma talks uploaded and published on2August 2010 ****
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော် အပိုင်း(၁) ၂၀-၂-၂၀၀၉
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော် အပိုင်း(၂) ၂၁-၂-၂၀၀၉
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော် အပိုင်း(၃) ၂၂-၂-၂၀၀၉
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော် အပိုင်း(၄) ၂၃-၂-၂၀၀၉
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော် အပိုင်း(၅) ၂၄-၂-၂၀၀၉
****dhamma talks uploaded and published on 31 August 2010 ****
****dhamma talks uploaded and published on6Sept 2010 ****
၁။ ၂-၉-၂၀၀၉ (၁၂)နှစ်ကြာ အဖြေရှာခဲ့ရသောတရားများ
၂။ ၃-၉-၂၀၀၉ ဒိဋ္ဌိသမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ် တရားတော်
၃။ ၃-၁၀-၂၀၀၉ သံယောဇဉ်အကြောင်း တရားတော်
၄။ သံဝေဇနိယ ဓမ္မကထာ တရားတော်
၅။ ၄-၁၀-၂၀၁၀ ဓမ္မစာရီ အဓမ္မစာရီ တရားတော်
၆။ ၉-၁၀-၂၀၀၉ သူ.အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်း တရားတော်
၁။ ၄-၁၀-၂၀၀၈ ဘဝနှင့်ဘဝနိရောဓအကြောင်း
၂။ ၁၉-၁-၂၀၀၉ ကောင်းတာကိုသာရွေးချယ်ကြပါ
၃။ ၃၀-၁၀-၂၀၀၉ စုဆောင်းခြင်းနှစ်ရပ်
၄။ ၁-၁၁-၂၀၀၉ လောက၏အဆုံးသို.ရောက်ရှိခြင်း
၅။ ၂-၁၁-၂၀၀၉ ဗျာကတ၊ အဗျာကတ
၆။ ၃-၁၁-၂၀၀၉ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို.၏နှလုံးအိမ်
၁။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၉ အာဒိတ္တသုတ်ကိုလေ.လာသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းတရားတော်
၂။ ၃၀-၁၁-၂၀၀၉ တရားထူးရနိုင်သူအကြောင်း
၃။ ၁-၁၂-၂၀၀၉ စိတ်၏ထွက်ပေါက်များ
၄။ ၂-၁၂-၂၀၀၉ သမ္မာဒိဠိအကြောင်း
၅။ ၈-၁၂-၂၀၀၉ မာနတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၆။ ၉-၁၂-၂၀၀၉ ဥပါဒါနပစ္စယောဘဝေါ
၇။ ၁၁-၁၂-၂၀၀၉ ဖြစ်နိုင်တာနဲ. မဖြစ်နိုင်တာ
၁။ ၂၅-၉-၂၀၀၉ ဓမ္မမှတ်ကျောက်
၂။ ၁၆-၁၀-၂၀၀၉ ဆုတောင်းပြည်.ဝမြတ်ဓမ္မ
၃။ ၁၇-၁၁-၂၀၀၉ အမြတ်ဆုံးသော ဘာဝနာ
၄။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၉ ဘဝဆည်းဆာ ကရုဏာ
၅။ ၇-၁၂-၂၀၀၉ မွေးနေ.လက်ဆောင်
၆။ ၁၃-၁၂-၂၀၀၉ သညာအသိနှင်.ပညာသိ
၁။ ၄-၁-၂၀၁၀ မင်္ဂလာသုတ် အနှစ်ချုပ်
၂။ ၅-၁-၂၀၁၀ နန္ဒီဒုက္ခသာမူလံ
၃။ ၆-၁-၂၀၁၀ ဒဿနဝိသုဒ္ဓိ
၄။ ၈-၁-၂၀၁၀ ခုခံစွမ်းအား
၅။ ၁၀-၁-၂၀၁၀ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူမှ အောင်နိုင်ခြင်း
၆။ ၁၁-၁-၂၀၁၀ ပီယတေဇာယတေးသောကော
၇။ ၁၂-၁-၂၀၁၀ အကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင်ရှာ
****dhamma talks uploaded and published on 13 Sept 2010 ****
****dhamma talks uploaded and published on 10 Dec 2010 ****
၁။ တရားတော် အပိုင်း (၁) ၁၆-၂-၂၀၁၀
၂။ တရားတော် အပိုင်း (၂) ၁၇-၂-၂၀၁၀
၃။ တရားတော် အပိုင်း (၃) ၁၈-၂-၂၀၁၀
၄။ တရားတော် အပိုင်း (၄) ၁၉-၂-၂၀၁၀
၅။ တရားတော် အပိုင်း (၅) ၂၀-၂-၂၀၁၀
၆။ တရားတော် အပိုင်း (၆) ၈-၆-၂၀၁၀
၇။ တရားတော် အပိုင်း (၇) ၉-၆-၂၀၁၀
၈။ တရားတော် အပိုင်း (၈) ၁၀-၆-၂၀၁၀
၉။ တရားတော် အပိုင်း (၉) ၁၃-၆-၂၀၁၀
၁၀။ တရားတော် အပိုင်း (၁၀) ၁၄-၆-၂၀၁၀
၁၁။ တရားတော် အပိုင်း (၁၁) ၁၅-၆-၂၀၁၀
၁၂။ တရားတော် အပိုင်း (၁၂) ၂၈-၆-၂၀၁၀
၁၃။ တရားတော် အပိုင်း (၁၃) ၂၉-၆-၂၀၁၀
****dhamma talks uploaded and published on 17 Jan 2011 ****
၅။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
၆။ နေတံ။ မမ
၅။ သဗ္ဗေ ဓမ္မံ အနတ္တံ
၂။ မတူတာတွေကို အတူထားနိုင်ခြင်း
၁။ ဆုမြတ်(၆) ဖြာ
၂။ သူတော်ကောင်းတရား တည်တန့်ပြန့်ပွါးရေး
၃။ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော
၃။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (၁)
၄။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (၂)
၁။ (၁၂) နှစ်ကြာ အဖြေရှာ
၄။ သံယောဇဉ် အကြောင်း
၅။ ဓမ္မစာရီ - အဓမ္မစာရီ
၁။ စိတ်၏ထွက်ပေါက်များ (၁-၁၂-၂၀၀၉)
၂။ သမ္မာဒိဠိအကြောင်း (၂-၁၂-၂၀၀၉)
၃။ မွေးနေ့ လက်ဆောင်တရားတော်များ (၇-၁၂-၂၀၀၉)
၄။ မာနတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၈-၁၂-၂၀၀၉)
၅။ ဥပါဒါန ပစ္စယောဘဝေါ (၉-၁၂-၂၀၀၉)
၆။ ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာ (၁၀-၁၂-၂၀၀၉)
၇။ သညာအသိနှင့်ပညာအသိ (၁၃-၁၂-၂၀၀၉)
၁။ မင်္ဂလသုတ်အနှစ်ချုပ် (၄-၁-၂၀၁၀)
၂။ နန္ဒီ ဒုက္ခဿ မူလံ(၅-၁-၂၀၁၀)
၃။ ဒဿနဝိသုဒ္ဓိ (၆-၁-၂၀၁၀)
၄။ ခုခံစွမ်းအား (၈-၁-၂၀၁၀)
၅။ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူမှအောင်နိုင်ခြင်း (၁၀-၁-၂၀၁၀)
၆။ ဝိယတော ဇာယတေ သောကော (၁၁-၁-၂၀၁၀)
၇။ အကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင်ရှာ (၁၂-၁-၂၀၁၀)
၁။ ဘ၀အသွင်ကို ဓမ္မအမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း
၂။ ဘ၀ခရီးဝယ် ရွေးချယ်ရမဲ့လမ်း
၃။ လက်တွေ့ဘ၀ကို ပဋ္ဌာန်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၅။ အရှင်အာနန္ဒာ၏ အလွမ်းစကားနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓဆုံးမစကား
၆။ ဓာတုဝိဘင်္ဂဂသုတ်၊ အနှစ်ချုပ် တရားတော်
၈။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မြှင့်တင်ထား
၉။ မနုဿဓမ္မနှင့် ဥတ္တလိမနုဿဓမ္ဓ
၁၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့် ယနေ့ကမ္ဘာ
၁၂။ အလောင်းတော်သုမေဓာ၏ ဘ၀အပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်
၁၄။ မြတ်သောဥစ္စာ စုဆောင်းပါ
၁၅။ ယနေ့လူသားများရဲ့ မနက်ဖြန်ကမ္ဘာ
၁၆။ ရန်ကင်းမှ ရန်ရှင်မည်
၁၇။ နှစ်ဦးကာလ ဓမ္မလက်ဆောင်
၁၈။ တရားမြင်မှ ဘုရားမြင်မည်
၁၉။ ကိုးကွယ်ရာ အမှန်တရား
၂၀။ အကောင်းဆုံးသော ညတည
၂၂။ အကျင့်မှန်မှ နိဗ္ဗာန်ရ
၂၃။ ရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်မြတ်၏ နှစ်မတော်တို့၏ ဓမ္မအမြင်များ
၂၅။ သမ္မာ ပတ္တိ သုတ္တန်
၂၆။ ပမာဒနှင့် အပ္ပမာဒ
၂၈။ ဒကာရင်းကို ကယ်တင်ခြင်း
၂၉။ ဂတိကလ၏ ဘ၀တစိတ် သမိုင်းပုံရိပ်
၃၀။ ဓမ္မသည်သာ ကိုးကွယ်ရာ
၃၁။ လူ့ပြည်ရောက် နတ်တမန်အကြောင်း
၃၃။ သူတော်ကောင်းဥစ္စာ ခုနှစ်ဖြာ
၃၄။ အဘိဓမ္မာ နေ့မြတ်အခါ
၃၅။ တေမိကုမ္မာရ ဇာတ်တော် (၁)
၃၆။ တေမိကုမ္မာရ ဇာတ်တော် (၂)
၃၇။ တေမိကုမ္မာရ ဇာတ်တော် (၃)
၃၈။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၁)
၃၉။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၂)
၄၀။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၃)
၄၁။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၄)
၄၂။ ကမ္ဘာဦးက လူသားမျာအကြောင်း ၁၂-၇-၂၀၀၈
၄၅။ ထာဝရတွေးထားရမဲ့ ဘဝအရေးများ
၅၀။ မှန်ကန်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု
၅၂။ သြဃလေးဖြာ သံသရာ
၂။ သမ္မုသစ္စာ ပရမတ္တသစ္စာ
၃။ ရုပ်တရားများနှင့် ရုပ်၏ အကြောင်းတရား
၄။ ရုပ်တရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်း
၅။ စိတ်၏ သဘာဝ
၆။ စိတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အကြောင်း
၇။ စိတ်၏ အညစ်ကြေးများ
၈။ စိတ်ကို အမှီပြု အင်အားစုများ
၉။ စိတ်ဖြူစင်မှု အင်အားစုများ(၁)
၁၀။ စိတ်ဖြူစင်မှု အင်အားစုများ(၂)
၁၁။ ပညာမဲ့ သဒ္ဒါတရား(၁)
၁၂။ ပညာမဲ့ သဒ္ဒါတရား(၂)
၁၃။ ဘဝ၏ ဝန်ထုပ်ပိုများ
၁၄။ ၂၅၉၇ကြိမ် ဓမ္မစင်္ကြာ အခါ
၁၅။ လောဘနှင့် အလောဘ
၁၇။ ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်ကင်းခြင်း
၁၈။ သောတပန်၏ ပုံရိပ်လွှာ
၁။ အမတာဘိသေက-တရားတော် (မန္တလေး)
၂။ ဂတိကာလသုတ္တန် (အမရပူရ)
၃။ နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်မှအပါယ်တံခါးပိတ်မယ် (မင်္ဂလာဈေး)ဓမ္မာရုံ
၄။ ရင်ထဲကဓမ္မစွမ်းအားများ (၁) (မုံရွာ)
၅။ ရင်ထဲကဓမ္မစွမ်းအားများ (၂) (မုံရွာ)
၆။ အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာ (၁) (မုံရွာ)
၇။ အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာ (၂) (မုံရွာ)
၈။ ဟိုဘက်ကမ်းကငြိမ်းအေးတယ် (မန္တလေး)
၉။ ဓမ္မအသိဖြင့်အကျိုးရှိရှိနေမည် (ကြည့်မြင်တိုင်)
၁၀။ ကျေးဇူးတရားတော် (စမ်းချောင်း)
၁၁။ အသိတရားရှိသူတို.၏စိတ်နေသဘောထား (ကံမြင့်)
၁၂။ သာသနာပြုစွမ်းအားစု (မုံရွာ)
၁။ တောင်ပို့ထဲကရတနာ (ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း) (၈-၁၂-၂၀၀၇)
၂။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံခါး (ကြည့်မြင်တိုင်)
၃။ စွမ်းအားပြည့်စိတ်နှင့် စွမ်းအားမဲ့စိတ် (ကမာရွတ်)
၄။ အစွမ်းတန်ခိုးများနှင့်သာသနာ (ဗဟိုလမ်း)
၅။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည်သာလူ့အဆင့်အတန်း (နတ်ချောင်းတာမွေ)
၆။ သူတော်ကောင်းတို့၏စိတ်နေသဘောထား (အင်းစိန်အရှေ့ဂျို့ကုန်း)
၇။ စိတ္တေန၊ နိယတော၊ လောကော (ဘာဝနာလမ်း၊ စမ်းချောင်း)
၈။ အင်အားရှိမှအခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်မည် (လှိုင်သာယာ)
၁၀၊ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေ (မတ္တရာမြို့)
၁၁။ ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးနေ့များ (ကိုးဘွဲ့ရကျောင်း)
၁၂။ လောဘနှင့်အလောဘ (ဆူးလေစေတီတော်)
၁၃။ သာသနာ့ဗိမ္မာန် ဓမ္မာရုံ (ရန်ကင်း)
၁။ မေတ္တာနှလုံးအစဉ်သုံး (မင်္ဂလာဗျူဟာ)
၃။ ရောဂါကုစားစိတ်စွမ်းအား (ကံမြင့်)
၄။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ (မင်္ဂလာတောင်ညွန်.)
၅။ ကံကြမ္မာ၏ရုပ်ပုံလွှာများ (လှိုင်)
၆။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား (မင်္ဂလာဒုံ)
၇။ ဘောဂတဏှာ (စမ်းချောင်း)
၈။ အနှစ်တစ်ရာနှင့်တစ်နေ.တာ (စမ်းချောင်း)
၉။ ကောင်းတာကိုသာရွေးချယ်ကြပါ (အလုံ)
၁၀။ နေတံ မမ (ဒဂုံမြောက်)
၁၁။ နုစသော၊ နစအညော (မလွှကုန်း)
၁၂။ တို.မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ် (အင်းစိန်)
၁၃။ သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တော (ကြည်.မြင်တိုင်)
၁၄။ လွတ်မြောက်တဲ.စိတ် (ဗိုလ်တထောင်)
၁။ ဘဝအရေး စိတ်အေးရလေအောင် (သူဌေးလမ်း)
၂။ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော (ရန်ကင်း)
၃။ သဘာဝ၏ လှည့်စားမှုများ (ရန်ကင်း)
၄။ အားပေးစကား (ဥက္ကံမြို့)
၅။ မတူတာတွေကို အတူထားနိုင်ခြင်း (ဥက္ကံမြို့)
MP3 Disc 07
၁။ စိတ်ဖြစ်ပုံကို လေ့လာခြင်း (၁) ၂၁-၃-၂၀၀၉
၂။ စိတ်ဖြစ်ပုံကို လေ့လာခြင်း (၂) ၂၂-၃-၂၀၀၉
၃။ စိတ်အာရုံများနှင့် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စများ ၂၃-၃-၂၀၀၉
၄။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်းအကြောင်း(၁) ၂၄-၃-၂၀၀၉
၅။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်းအကြောင်း(၂) ၂၅-၃-၂၀၀၉
၆။ စိတ်ကို အာရုံနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း ၂၇-၃-၂၀၀၉
၇။ သတ္တဝါတို့၏ (၃၁) ဘုံအကြောင်း ၂၈-၃-၂၀၀၉
၈။ ဘဝနိဂုံး သေဆုံးခြင်းအကြောင်း ၂၉-၃-၂၀၀၉
၉။ ဘဝသစ်၌ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း ၃၀-၃-၂၀၀၉
၁၀။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းအကြောင်း ၃၁-၃-၂၀၀၉
၁၁။ သာသနာတော်ရှည်ကြာတည်တန့်ရေး (မုံရွာ) ၁-၃-၂၀၀၉
၁၂။ စိတ်နေစိတ်ထား (မုံရွာ) ၂-၃-၂၀၀၉
၁၃။ သေချာသောလမ်းက လျှောက်လှမ်းပါ (ကျောက်မြောင်း) ၂၀-၃-၂၀၀၉
၁၄။ ကံကိုဖယ်ရှား ကံတရား ၂၆-၃-၂၀၀၉
၁၅။ အနမ တဂ္ဂ သံသရာ (ကြည့်မြင်တိုင်) ၁-၄-၂၀၀၉
၁၆။ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် (ကြည့်မြင်တိုင်) ၂-၄-၂၀၀၉
MP3 Disc 08
၁။ ဝိဇ္ဇာနှင့်အဝိဇ္ဇာ (၂၂-၅-၂၀၀၉)
၂။ ကမ္ဘာဦးကလူသားများ (၇-၇-၂၀၀၈)
၃။ အနုမောဒနာ (၂၀-၁၂-၂၀၀၈)
၅။ နှလုံးသား၏ငြိမ်းအေးမှု (၁၁-၃-၂၀၀၉)ှု
၆။ အခွင့်ကောင်း (၁၉-၃-၂၀၀၉)
၇။ ဓမ္မလမ်းမှလျှောက်လှမ်းပါ (၁၅-၄-၂၀၀၉)
၈။ သာသနာပြု မြတ်ကောင်းမှု (၁၉-၄-၂၀၀၉)
၉။ အထင်နှင့်အမြင် (၂၀-၄-၂၀၀၉)
၁၁။ စံနမူနာယူရမည့်သူလိုလူ (၁၉-၅-၂၀၀၉)
၁၂။ ကိုးကွယ်မှု၏အဓိပ္ပါယ် (၂၃-၅-၂၀၀၉)
၁၃။ အမှန်သိခြင်းမသိခြင်း (၂၄-၅-၂၀၀၉)
၁၄။ စံထားရမည့်ကိုယ်ကျင့်တရားရှိသူများ (၃-၈-၂၀၀၉)
၁၅။ အကြောင်းကင်းပြတ် အငြိမ်းဓါတ် (၆-၈-၂၀၀၉)
၁၇။ ၁၂-နှစ်ကြာ အဖြေရှာခဲ့ရသော မေးခွန်းများ(၂-၉-၂၀၀၉)
၁၈။ ဒိဠိသမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ် (၃-၉-၂၀၀၉)
MP3 Disc 09
၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (၂၈-၉-၂၀၀၉)
၅။ ဓမ္မာနုပဿနာ (၀၂-၁၀-၂၀၀၉)
၆။ ပုညသဟာရများ (၀၅-၁၀-၂၀၀၉)
၇။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (၁) (၀၆-၁၀-၂၀၀၉)
၈။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (၂) (၀၇-၁၀-၂၀၀၉)
၉။ ဓမ္မစာရီနှင့်အဓမ္မစာရီ (၀၄-၁၀-၂၀၀၉)
၁၀။ သံယောဇဉ် (၀၃-၁၀-၂၀၀၉)
၁၁။ သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်း (၀၉-၁၀-၂၀၀၉)
၁၂။ ဓမ္မဒိန္နာ၏တရားအဖြေများ (၀၅-၁၁-၂၀၀၉)
၁၃။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း (၀၆-၁၁-၂၀၀၉)
၁၄။ သီလနှင့်သုတ (၁၀-၁၀-၂၀၀၉)
၁၅။ စုဆောင်းခြင်းနှစ်ရပ် (၃၀-၁၀-၂၀၀၉)
၁၆။ လောက၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်း (၁-၁၁-၂၀၀၉)
၁၇။ ဗျာကတနှင့်အဗျာကတ (၂၁-၁၂-၂၀၀၉)
၁၈။ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့၏နှလုံးအိမ် (၃-၁၁-၂၀၀၉)
၁။ အဖြူလား အမဲလား
၂။ ယမမင်း၏ ဆန္ဒ
၄။ ဆုတောင်းပြည့်ဝ မြတ်ဓမ္မ
၅။ အမြတ်ဆုံး ဘာဝနာ
၆။ အာဒိတ္တသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၈။ စိတ်၏ ထွက်ပေါက်
၁၀။ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်
၁၁။ မာနတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၁၂။ ဥပါဒါနပစ္စယော ဘဝေါ
၁၃။ ဖြစ်နိုင်တာနှင့် မဖြစ်နိုင်တာ
၁၄။ သညာသိနှင့် ပညာသိ
၁၇။ သောတာပန်၏ ဘဝပုံရိပ်လွှာ
MP3 Disc 011
၁။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း (၆-၁၁-၂၀၀၉)
၂။ စိတ်၏အတွေးများ (၄-၂-၂၀၀၉)
၃။ မင်္ဂလသုတ်အနှစ်ချုပ် (၄-၁-၂၀၁၀)
၄။ နန္ဒီဒုက္ခဿမူလံ (၅-၁-၂၀၁၀)
၅။ ဒဿနဝိသုဒ (၆-၁-၂၀၁၀)
၆။ ခုခံစွမ်းအား (၈-၁-၂၀၁၀)
၇။ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူမှအောင်နိုင်ခြင်း (၁၀-၁-၂၀၁၀)
၈။ ဝိယတော ဇာယတေ သောကော (၁၁-၁-၂၀၁၀)
၉။ အကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင်ရှာ (၁၂-၁-၂၀၁၀)
၁၀။ က္ကနြ္ဒိယဘာဝနာမြတ်ဒေသနာ (၁၇-၁-၂၀၁၀)
၁၁။ သေဝိတဗ္ဗနှင့် အသေဝိတဗ္ဗ (၁၈-၁-၂၀၁၀)
၁၂။ ဒေဝဒဟသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၅-၁-၂၀၁၀)
၁၃။ ရသတဏှာ (၁-၂-၂၀၁၀)
၁၄။ တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေး (၂-၂-၂၀၁၀)
၁၅။ စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူ အကြောင်း (၃-၂-၂၀၁၀)
၁၆။ အကြောင်းဆုံမှအကောင်းဆုံမည် (၄-၂-၂၀၁၀)
၁၇။ သံသရာခရီးသွား အမှားမလုပ်မိစေနှင့် (၇-၂-၂၀၁၀)
၁၈။ အဆိုးဆုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်မှအကောင်းဆုံးရမည် (၈-၂-၂၀၁၀)
၁၉။ အထင်မှားအမြင်မှား (၉-၂-၂၀၁၀)
၂၀။ ကမ္မဠာန်းအလုပ်နှင့်အိပ်ငိုက်ခြင်း (၁၅-၂-၂၀၁၀)
၂၁။ ပါရမီကုသိုလ် (၁၉-၂-၂၀၁၀)
၂၂။ တရားသိလျှက်အကျင့်ခက် (၂၁-၂-၂၀၁၀)
၂၃။ အနာမဲ့သူ ရှင်ဗာကူ (၂၂-၂-၂၀၁၀)
MP3 Disc 012
၁၁။ အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ
၁၂။ လူတိုင်းအတွက် ဝိပဿနာ
၁၄။ သမထပုဗ္ဗင်္ဂမ ဝိပဿနာ
၁၇။ မေတ္တ သုတ်အနှစ်ချုပ်
၁၉။ ဒေဝဒဟသုတ် အနှစ်ချုပ်
MP3 Disc 013
၂။ သတိမကွာ အသိပညာဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
၈။ သင်္ခတ နှင့် အသင်္ခတ
၁၄။ ဆန္ဒောဝါဒ သုတ္တန်
၁၆။ ဘဝခရီးသွား အနည်းအများ
၁၈။ ရေစက်ချ အနုမောဒနာ
MP3 Disc 014
၁။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ - ၁
၂။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ - ၂
၃။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ - ၃
၅။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ မဟာပုရိသ လက္ခဏာတော်
၆။ မုံရွာကျောင်း ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၈။ သတိမထားက လှည့်စားခံရခြင်း
၁၁။ စစ်ကိုင်းမြို့မဟာသုဗောဓာရ ကျောင်းဆောင်သစ်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
MP3 Disc 015
၁။ အခက်ခဲကျော်လွှား လူခွန်အား
၂။ ပညာဝိမုတ္တ ရဟန္တာ
၆။ ရန်ကုန်မြို့ သဒ္ဓမ္မရံသီ ယောဂီများဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၇။ မုံရွာမြို့ သဒ္ဓမ္မဇောတိကသုဗောဓာရုံကျောင်းအတွင်းတွင်ကျောင်းဆောင်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၈။ တိပိဋက ပူဇော်ပွဲ သြဝါဒတရား
၉။ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ(၅၂)နှစ်ပြည့်ကျောင်းတိုက်နေ့ သြဝါဒတရား
၁၀။ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၁၁။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၁
၁၂။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၂
၁၄။ အဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိဇ္ဇာ
DVD MP3 -01
၈။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၁)
၉။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၂)
၁၀။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၃)
၁၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၄)
၁၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၅)
၂၄။ ပါရမီရှင်တို.ဘဝ (၁)
၂၅။ ပါရမီရှင်တို.ဘဝ (၂)
DVD MP3 -02
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၁
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၂
၀၀၈။ ရုပ်တရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁)
၀၀၉။ ရုပ်တရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂)
၀၁၆။ စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်း (၁)
၀၁၇။ စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်း (၂)
၀၁၉။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်း (၁)
၀၂၀။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်း (၂)
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၃
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၄
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၅
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၆
၀၆၇။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (နိဒါန်း)
၀၆၈။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (ကာယာနုပဿနာ)
၀၆၉။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (ဝေဒနာနုပဿနာ)
၀၇၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (ဓမ္မာနုပဿနာ)
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၇
၀၇၂။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၁)
၀၇၃။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၂)
၀၇၄။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၃)
၀၇၅။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၄)
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၈
၀၇၆။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၁)
၀၇၇။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၂)
၀၇၈။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၃)
၀၇၉။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၄)
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၉
၀၈၄။ အက္ခဏ သုတ္တန်
၀၈၅။ အဘယ သုတ္တန်
၀၈၆။ သမာပတ္တိ သုတ္တန်
၀၈၇။ သမာပတ္တိ သုတ္တန်
၀၉၁။ အမြတ်ရတနာ ဥပါသကာကျင့်စဉ်
၀၉၆။ ဃဋိကာရ သုတ္တန်
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၁၀
၁၄၃။ ဒိဠေ ဒိဠေ မတ္တံ
၁၄၈။ (၂၅၉၇) ကြိမ်မြောက် ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့
၁၅၂။ အသိသုံးပါး နှင့်အမေးအဖြေ
၁၆၂။ အနှစ်မဲ့တာမြင်မှအနှစ်သာရ ရနိုင်မည်
၁၆၆။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံဆိပ်
၁၆၇။ စွမ်းအားပြည့်စိတ်နှင့် စွမ်းအားမဲ့စိတ်
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၁၁
၁၈၂။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
၁၈၉။ န စ သော န စ အညော
၁၉၁။ သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တာ
၁၉၄။ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော
၁၉၈။ မတူတာတွေကို အတူထားနိုင်ခြင်း
၁၉၉။ အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ
၂၀၀။ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့်အမေးအဖြေများ - ၁
၂၀၁။ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့်အမေးအဖြေများ - ၂
၂၀၂။ ဆုမြတ်(၆) ဖြာ
၂၁၀။ ကံကိုဖယ်ရှား ကံတရား
၂၁၇။ အနတမဂ္ဂ သံသရာ
၂၂၀။ ၁၂-နှစ်ကြာ အဖြေရှာခဲ့ရသော မေးခွန်းများ
၂၂၇။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (ကုဏ္ဍလကေသာ)
၂၂၈။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (ကိသာဂေါတမီ)
၂၄၄။ ဥပါဒါန ပစ္စယော ဘဝေါ
၂၄၇။ လူတိုင်းအတွက် ဝိပဿနာ
၂၅၃။ သာသနာပြု မြတ်ကောင်းမှု
၂၅၄။ အကြောင်းကင်းပြတ် အငြိမ်းဓါတ်
၂၆၄။ သံဝေဇနိယ ဓမ္မကထာ
ဖိုင်အမှတ်စဉ် - ၁၂
၂၆၇။ မေတ္တ သုတ်အနှစ်ချုပ်
၂၇၃။ ဝိယတော ဇာယတေ သောကော
၂၇၅။ ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ ပဠာန်းမြတ်ဒေသနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁)
၂၇၆။ ဘဝနှင့်ဆက်စပ်ရ်ျ ပဠာန်းမြတ်ဒေသနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂)
၂၇၈။ သေဝိတဗ္ဗနှင့် အသေဝိတဗ္ဗ
၂၇၉။ ဒေဝဒဟသုတ် အနှစ်ချုပ်
၂၈၀။ မလ္လိကာဒေဝီ အမေါ်ပုစ္ဆာ
၂၈၆။ သံသရာခရီးသွား အမှားမလုပ်မိစေနှင့်
၂၉၂။ အနာမဲ့သူ ရှင်ဗာကူ
၃၀၁။ ဆန္ဒောဝါဒ သုတ္တန်
၃၀၃။ သမထပုဗ္ဗင်္ဂမ ဝိပဿနာ
၃၀၅။ သင်္ခတ နှင့် အသင်္ခတ
၃၀၇။ ဘဝခရီးသွား အနည်းအများ
၃၁၁။ ရေစက်ချ အနုမောဒနာ
၃၁၂။ သတိမကွာ အသိပညာဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
၃၁၈။ သတိမထားက လှည့်စားခံရခြင်း
၃၂၁။ အခက်ခဲကျော်လွှား လူခွန်အား
၃၂၆။ ရန်ကုန်မြို့ သဒ္ဓမ္မရံသီ ယောဂီများဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၃၂၈။ စစ်ကိုင်းမြို့မဟာသုဘောဓာရ ကျောင်းဆောင်သစ်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၃၂၉။ မုံရွာမြို့ သဒ္ဓမ္မဇောတိကသုဗောဓာရုံကျောင်းအတွင်းတွင်ကျောင်းဆောင်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၃၃၀။ တိပိဋက ပူဇော်ပွဲ သြဝါဒတရား
၃၃၁။ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ(၅၂)နှစ်ပြည့်ကျောင်းတိုက်နေ့ သြဝါဒတရား
၃၃၂။ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၃၃၃။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၁
၃၃၄။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၂
၃၃၆။ အဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိဇ္ဇာ
၃၃၈။ ဘုရားအလောင်းတို့၏ ဘဝအပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း
၃၃၉။ ပညာဝိမုတ္တ ရဟန္တာ
၃၄၀။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ မဟာပုရိသ လက္ခဏာတော်
၃၄၁။ ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ်
၃၄၂။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ - ၁
၃၄၃။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ - ၂
၃၄၄။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ - ၃
၃၄၅။ AKH မိသားစု၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၃၄၆။ အိမ်သစ်တက်အလှူ အနုမောဒနာ
****dhamma talks uploaded and published on9Sept 2011****
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ -၂ )
၀၀၁။ စွယ်တော်လေးဆူ ဘုရားရှိခိုး
၀၀၂။ ဆရာ နှင့် တပည့်
၀၀၄။ လူလိမ္မာ ပညာရှိ
၀၀၅။ သင်ယူခြင်း နှင့် သာသနာ
၀၀၆။ ကောင်းကျိုးပြည့်ဝ မြတ်သီလ
၀၀၈။ ဤဘဝ၏အခြားမဲ့ ၌
၀၀၉။ ဆဆက္ကဒေသနာ နှင့် ဓမ္မဝိပဿနာ
၀၁၀။ မဟာပညာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ထူးခြားသောတရား (၂)ပုဒ်
၀၁၂။ ကာယဘာဝနာနှင့် စိတ္တဘာဝနာ
၀၁၄။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ -၁
၀၁၅။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ-၂
၀၁၆။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ -၃
၀၁၉။ သူတော်ကောင်း နှင့် သူတော်ကောင်းတရား
၀၂၄။ ဆွမ်းအနုမောဒနာ (ဖြုးမိသာစု)
၀၂၆။ ပါရာယနဒေသနာ - ၁
၀၂၇။ ပါရာယနဒေသနာ -၂
၀၂၈။ ပါရာယနဒေသနာ - ၃
၀၂၉။ ပါရာယနဒေသနာ - ၄
၀၃၀။ ပါရာယနဒေသနာ - ၅
၀၃၁။ ပါရာယနဒေသနာ - ၆
၀၃၂။ ပါရာယနဒေသနာ - ၇
၀၃၃။ ပါရာယနဒေသနာ - ၈
၀၃၄။ ပါရာယနဒေသနာ - ၉
၀၃၅။ ဗုဒ္ဓ္ဓစွမ်းအား ဉာဏ် (၁၀) ပါး
၀၃၇။ ခန္ခာနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ
၀၃၈။ ပဋိသမ္ဘိဒါ ဉာဏ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၀၄၀။ သာရဏီယ အနုမောဒနာ (သံလျင်)
၀၄၂။ ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိဿာ
၀၄၃။ သူယုတ်မာတို့၏ အမူအကျင့်များ - ၁
၀၄၄။ သူယုတ်မာတို့၏ အမူအကျင့်များ -၂
၀၄၅။ ဓမ္မစကြာည၏ အမှတ်တရဒေသနာ
၀၄၆။ နိဗ္ဗာန်သည် အားလုံးအတွက်
၀၄၇။ ပြစ်မှားခြင်း နှင့် ဒဏ်သင့်ခြင်း
၀၄၈။ နိယျာနိက သာသနာ
၀၅၀။ သုခချမ်းသာ အကြောင်းရှာ
၀၅၁။ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ
၀၅၂။ မဓုပိဏ္ဍိကသုတ် အနှစ်ချုပ်
၀၅၃။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၁
၀၅၄။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း -၂
၀၅၅။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၃
၀၅၆။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၄
၀၅၇။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၅
၀၅၈။ ယထာဘူတ ဒဿန
၀၅၉။ ကမ္မဝဋ်မှ လွတ်မြောက်ရေး
၀၆၀။ လက်တွဲညီညာ သာသနာပြုကြ
၀၆၂။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား - ၁
၀၆၃။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား - ၂
၀၆၄။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား - ၃
၀၆၅။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား - ၄
၀၆၆။ သိက္ခာထပ်၊ ရဟန်းခံ၊မွေးနေ့ အလှူအနုမောဒနာ
၀၆၇။ ဘာသာတရားနှင့် ကိုးကွယ်မှုသရဏဂုံ
၀၆၈။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးဆင့် ကြာလေးပွင့်
၀၇၀။ အခွင့်ကောင်းကို ရအောင်ယူ
၀၇၁။ သံသရာအမှား နှင့် ရှင်သာရိပုတြာ၏အကြင်နာတရား
၀၇၂။ မိဘကျေးဇူးတရားနှင့် ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကား
၀၇၃။ အလေးထား ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်ကောင်းအောင်ပြင်
၀၇၄။ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်ပြင်
၀၇၅။ မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင်
၀၇၇။ ကမ္မနိယာမ နှင့် လောကသဘာဝ
၀၇၈။ ရှာဖွေခြင်း နှင့် ရရှိခြင်း
၀၇၉။ ငါမရှိလျှင် ငါ့ဟာမရှိ
၀၈၃။ အနုမောဒနာ ( ရွှေမြိုင်သီလရှင်ကျောင်း)
၀၈၄။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၁
၀၈၅။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၂
၀၈၆။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၃
၀၈၇။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၄
၀၈၈။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၅
၀၈၉။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၆
၀၉၀။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၇
၀၉၁။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၈
၀၉၂။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၉
၀၉၃။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၁၀
၀၉၄။ မွေးနေ့အနုမောဒနာ ( ကိုရန်အောင်ဖြူး)
၀၉၅။ အမ္ဗ္ဗပါလီ၏ဘဝ နှင့် သင်္ခန်းစာ
၁၀၀။ အရှုပ်ကို ရှင်းနိုင်သူ
၁၀၁။ သဒ္ဓမ္မပတိရူပကသုတ် အနှစ်ချုပ်
၁၀၃။ ဘုရားပွင့်မှ ကြားရသည့်အဖြေ
၁၀၄။ အဖေါ်နဲ့နေခြင်းနှင့် အဖေါ်မဲ့နေခြင်း
၁၀၇။ ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကို လေ့ကျင့်မွေးမြူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
၁၀၉။ အိမ်တက်အလှူမင်္ဂလာအနုမောဒနာ (ဦးစံသာ)
၁၁၀။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ (သန်လျင်)
၁၁၁။ ကမ္မဝိပါကောအစိန္တေယျော
၁၁၂။ စုံဆင်းယူ နှင့်ဆန်တက်သူ
၁၁၃။ သြဝါဒအနုမောဒနာ (မြန်အောင်သီလရှင်စာသင်တိုက်)
၁၁၅။ ဓမ္မစာပေသင်ယူခြင်းနှင့် မှန်ကန်သောအမြင်
၁၁၆။ အလှူအနုမောဒနာ (�လင်း� စိန်ရွှေရတနာဆိုင်)
၁၁၇။ သစ္စာအနက် (၁၆)ချက်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၁၁၈။ အနုမောဒနာ (စုပေါင်းရဟန်းခံရှင်ပြု)
၁၂၀။ ခိုင်မာသော ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား
၁၂၃။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ (ထားဝယ်)
၁၂၆။ ဓမ္မသာကစ္ဆာ
၁၃၁။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိက နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသည်
၁၃၄။ သီလအကြောင်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၁၃၇။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် - ၁
၁၃၈။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် - ၂
၁၃၉။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် - ၃
၁၄၀။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် - ၄
၁၄၁။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် - ၅
၁၄၂။ ပါချုပ်ဆရာတော်၏ (၅၂)ဝါမြောက် ဥပသမ္ပဒါအနုမောဒနာ
၁၄၃။ စိတ်ချမ်းသာမှ ကိုယ်ကျန်းမာ မည်
၁၄၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျေးဇူးကို အထူးပေးဆပ်ခဲ့သူ
၁၄၅။ အကြောင်းရှာကြံ အဖြေမှန်တွေ့ - ၁
၁၄၆။ အကြောင်းရှာကြံ အဖြေမှန်တွေ့ - ၂
၁၄၇။ နတ်တွေစုံစမ်းတဲ့ လူ့ပြည်သတင်း
၁၄၉။ မွေးနေ့အနုမောဒနာ (ပြင်ဦးလွင်မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးအိမ်)
၁၅၀။ ဘိုးဘွားများနှင့် အပစာယနာကုသိုလ်တရား
၁၅၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် ဝိပဿနာ
၁၅၂။ ဝေဒယိတသုခ နှင့်သန္တိသုခ
၁၅၃။ အနုမောဒနာ (ရွှေအိုးဝေ ကျောင်းရေစက်ချ)
၁၅၄။ သာမာဝတီ၏ဘဝ နှင့် သင်္ခန်းစာ
၁၅၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာ နှင့်စကြာဝဠာ
၁၅၆။ သက္ကပဉ္စသုတ်လာ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ - ၁
၁၅၇။ သက္ကပဉ္စသုတ်လာ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ -၂
၁၅၈။ သက္ကပဉ္စသုတ်လာ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ - ၃
၁၆၀။ ကျင့်ပုံ့ထူးခြား ဉာဏ်စွမ်းအား
၁၆၁။ တရားနာငြား ဉာဏ်စွမ်းအား
****ebook uploaded on 29 March 2011****
ဘ၀အသွင်ကို ဓမ္မအမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း
ယနေ့လူသားများရဲ့ မနက်ဖြန်ကမ္ဘာ
Fundamental Abhidhamma Part 2